Ngaba ufanele ubone okanye ukulawula umyeni wakho iiyure ezingama-24 ngosuku? Iveki evelele ngokwahlukileyo, ngenxa yentlekele yangempela? Ukuba umhlobo ongekho, uziva ungonwabi, umbiza rhoqo ("Drum, uphi na?") Okanye ubhale i-sms ("Ndingubani na?"), "Ndikukhumbula," "Khawuleza")? Ukuba eli bali lithetha ngawe, ke siya kuwe! Amahlaya amahlaya, kodwa thina, bafazi, sisidalwa seemvakalelo, ngoko ngoko sinokuyikrokra umntu ngokubonakalisa kwethu iimvakalelo. Uphi umgca phakathi kothando kunye nokunyaniseka? Indlela yokulahla ukuxhomekeka kwamadoda? Xa inkululeko yabalingani bobudlelwane kubudlelwane babo, kwaye xa ijika yabaqabane ibe ngabasemzini? Indima yokuncedisa ekuphuculweni kwengqondo yobuntu ibonakalisa ngokuqhelekileyo le mihla.
Akunakwenzeka njani ukutshatyalaliswa kwintanda?
Abo bazithandayo, baphumelela kakhulu ubudlelwane. Le nyaniso. Zama esikhundleni sokuncedisa ukutshintsha ubuncinane inxalenye yomelelo lakho elingenakuphikelela kwaye ubonise umyeni wakho ukuba awuyiyo ukuqhubeka kwakhe okunengqiqo okanye-ngakumbi nakakhulu - isicelo sokukhululeka kunye nomntu. Mbuze ngomsebenzi wakhe kunye neentlanganiso, ungakhohlwa ukuba undixelele ukuba usuku lwakho luni (nangona iqabane lakho lingenalo umdla kulo mkhuba). Nasiphi na isiganeko singachazwa ngeendlela ezahlukeneyo. Zama ukuqaphela inkqubela yakho kunye nempumelelo yaloo mini, iya kuphakamisa ukuzithemba kwethu - kwaye wenze iqabane lakho libukeke ngokuhlukileyo. Ungalindelanga ukuphelelwa lithemba, xa uya kuphinda achithe yonke iMigqibelo kunye nabahlobo kwigalaji, iinqwelo zokulwa okanye ukuloba. Sitshintsha umyalelo oqhelekileyo wezinto: uxela ngezicwangciso zakhe, kwaye wenza uhlazo. Umsebenzi wakho kukuza phambili! Yiya kunye nentombi yakho kumabhayisikobho, ukuyothenga okanye kwi-cafe uze uqaphele umlingane: "Namhlanje andiyi kuba ekhaya yonke imini, lungiselela into / uhlale nomntwana / uhlamba, nceda, phantsi." Umyeni wakho uya kumangaliswa kwaye akanakukuphikisa. Intsapho, indoda, abantwana - kuyamangalisa! Umsebenzi wakho, izinto zokuzilibazisa, ukuphumla (kwaye kungekuphela kwintsapho) kufuneka kukukholise. Yingakho akufanele uthabathe iingxaki zonke zemihla ngemihla, uzikhulule ngokupheleleyo kumntu (emva kwakho konke, unako nezinto ezininzi ukwenza ngaphandle kokucoca, ukucoca kunye nokupheka). Yabela uxanduva kwaye ungakulibala ukuziva uxolo kuwe. Akukho nto eyenzekayo xa ungahlambi umgangatho ekhitshini uze uzinike ixesha lakho (umzekelo, yenza imaski okanye uhlambe). Umoya wakho omangalisayo uya kudluliselwa kumyeni wakho kunye nawe, mhlawumbi mhlawumbi, akuyi kubuza kuye ikhulu leminyaka: "Sasha, uyandithanda?"
Kwaye, ekugqibeleni, indlela engcono yokuphelisa ukuxhomekeke kwindoda kumntu kwaye unamathele kuye kukufumana isizathu. Kutheni kufuneka uhlale uziva ufuna? Mhlawumbi, konke kukungakhuselekanga kwakho (awukwazi ukuthatha naziphi na izigqibo ngokwakho, ngoko ke uhlala uguqula zonke iingxaki kumagxa omlingane). Kusenokwenzeka ukuba uloyiko lokuba uhlala wedwa kwaye ukuziphatha kwakho, ngokwenene, kuyindlela yokukhusela: ngoko, uzama ukubopha indoda. Okanye mhlawumbi yonke into kukuba uyashukunyiswa ngumzulwana wesisu oya kutshintshela kumyeni wakho ("Uyadla?", "Gqoka ngokufudumele kwisitalato kubanda!", "Ndibize xa ufika emsebenzini") okanye, ngokulandelelana , isizathu asikho kuwe, kodwa kwiqabane lakho (unobanda obuphefumlelweyo, kwaye kufuneka ucele isabelo sakho sokuncoma, ukudibanisa kunye namazwi amnandi)? Njengoko uyazi, ukuqonda ingxaki kuyisitshixo ekuxazululeni.
Okufakwe kwiiNcedisi zokuQinisekisa
Awufanele ubize umsebenzi womyeni wakho ama-7-10 ngamaxesha nje ukutshela ukuba unxungukile okanye uyamthanda ngokuthandana naye (ukubonakalisa iimvakalelo kubonakala kukuhle kuphela okokuqala, kwaye akukho ndlela kubo bonke abantu).
Izibheno "i-pussy", "ikati", "bunny" kunye ne "kukushech" iyamkelwa kuphela ekhaya. Akufanele ubize umyeni wakho onjalo kunye nabalingane bakhe okanye abahlobo.
Amagama athi "Ndiyazi ukuba uziva kakubi", "Ndiqinisekile ukuba kuya kuba ngcono kuwe ukuba ..." baya kulahlwa. Okokuqala, kungakhathaliseki ukuba uneminyaka engakanani oye wahlala kunye, awukwazi ngokwenene ukuba yintoni umyeni wakho uvakalelwa kwangoko. Okwesibini, indoda iya kuqalisa ukuqonda ukuba awukho njengowesifazane kunye nentombi ethandekayo, kodwa njengomama (kwaye oku kukuqala kokuphela kobudlelwane bobulili).
Iimvakalelo zecala ayilona isiseko esihle somtshato. Iintlawulo; "Ndibingelele yonke into ngenxa yentsapho, kwaye awukwazi ukuyeka ukuloba!", "Asinakukubona lonke iiveki ngenxa yomsebenzi wakho, ndithembele ngeveki, kwaye uya kuphinda uye kwindawo ethile nabahlobo bakho!", " Abantwana balilibele igama lakho! "- baninzi, baya kubakhokelela ekuhlakeleni, ukuhlambalaza kunye nokuxabana. Umsebenzi wakho awukubonakalisa ukuba umyeni wakho ubeka phi ityala phambi kwayo yonke into phambi kwakho (okanye ngakumbi nakakhulu - phambi koonyana bakho neentsapho) kwaye umxelele ngeemvakalelo zakho ("Ndiya kuba lusizi xa uhamba", "Ndiyayika ukuba ndingabhekana nabantwana bodwa. .. "," Ndingathanda ukuchitha le veki kuphela! ").
Ukuxhatshazwa ngokufanelekileyo kunomdla
Ewe, bobabili umyeni wakho kunye nawe (kwaye ngokuqinisekileyo) kufuneka babe nabahlobo babo, ixesha langasese, iiholide ezidibeneyo kunye ezahlukileyo, ilungelo lokuba yedwa, kunye nokuthulisa nokubiza ugqwetha. Akufanelekile ukuvalwa, ngokungathandabuzekiyo. Ukuba nezinto zakho zokuzilibazisa, ukuvezwa kunye namava, ufumana isizathu kunye nezihloko zentetho, ziba nomdla ngakumbi, kwaye zifezekise ibhonasi enkulu (ngelo xesha unalo ixesha elihle lokulibaleka, kwakhona kwakhona ukuba ukuphinda kubuyele kwakhona). Nangona kunjalo, kwenzeka kwakhona ngenye indlela: ngokusebenza, umdlalo wenkululeko ("yiza xa ufuna", "yenza oko ufunayo") uhlala ungabi nantoni, kwaye ngoku phantsi kweendlu zendlu enye akasayi kuhlala nomyeni nomfazi, kodwa abangaziwayo kwabanye abantu. Ukuvakalelwa ngomlinganiselo kunye nokuvumelana, kunye nentuthuzelo yinkqubo ebalulekileyo ekunikezeni inkululeko yabanye bomtshato. Into enye ukuba indoda yakho ichitha iveki yekhefu lakhe eKarelia kunye nabahlobo bakhe ekulobeni, kunye nezinye ezithathu - kunye nawe nabantwana olwandle, kunye nezinye - ukuba uya kunye nomhlobo wakhe ongatshatanga kwiindawo zaseYurophu (ngoxa uhleli kweli lizwe pheka i borski). Oku kufana neemfuno zomntu. Ukuba umyeni wakho uchitha yonke iveki kunye nabahlobo bakhe, emsebenzini okanye kwikhompyutheni - eli sihlandlo sokubonisa, ukuthetha ngokugqithiseleyo uphinde ucinge ngobuhlobo bakho. Ngokuqinisekileyo akuzange kube njalo! Ngoko, ngezinye iinkalo into ethile ishintshile ebomini bakho, inye imeko, inqaku elingazange likhunjulwe, imeko iphule into edibeneyo. Umsebenzi wakho kukuba ufike kumzantsi uze uwususe.
Indlela yokwaphula, ukunqoba uhlazo, ukuthozama?
Kutheni na umyeni wam uthelekise nabanye besetyhini?
Yintoni ekufuneka yenziwe ngelixa intsapho engenabantwana?
Idada ngesiTshayina ngama-noodle kunye nemifuno
Indlela yokubuyela ngokuvumelana emva kweeholide
Isaladi kunye nesisu senkukhu kunye nePeking iklabishi
Isaladi kwi-squid enekotyi